Dagaalo sababay khasaaro ka kooban dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay Jubada Hoose – Radio Daljir
Dagaalo sababay khasaaro ka kooban dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay Jubada Hoose
Kismayo,Jan 10 -Dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Kenya iyo kooxda Al-Shabaab ayaa maanta kadhacay wadooyinka isku xira deegaanada Qowqaani iyo Taabta oo hoosyimaada gobolka Jubada Hoose.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo katirsan Al-Shabaab ay weerareen gaadiid dagaal oo ay la socdeen ciidamada dalka Kenya oo marayay inta u dhaxeysa deegaanada Qawqaani iyo Taabta.
Laba katirsan ciidamada amaanka ee dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen dagaalka,waxaana jira khasaarooyin aan la cadayn karin oo uu sababay dagaalka.
Saraakiil katirsan Al-Shabaab ayaa sheegtay inay qabsadeen gaadiid dagaal oo ay wateen ciidamada Kenya oo ay dagaalka la galeen,mana jirto war rasmi ah oo milatariga Kenya uu kasoo saaray sheegashada Al-Shabaab.
Ciidamada amaanka ee Kenya ayaa soo galay dalka Soomaaliya bishii October ee sanadkii lasoo dhaafay kadib markii dowladda Kenya ay ku’eedaysay ururka Al-Shabaab ku lug lahaanshaha afduubyo taxane ah oo loogu geystay dalka Kenya dad ajnabi ah,inkastoo Al-Shabaab ay iska fogaysay eedeymahaasi.